Maxaad kala socotaa Madaxda kasoo qeyb galeysa Caleemo Saarka Farmaajo iyo Wadamada ay ka socdaan? - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa saacadaha soo aadan lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo munaasabad balaaran oo lagu caleemo saarayo Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Munaasabada Caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya waxaa kasoo qeyb galaya Madaxweynayaal, Wasiiro, iyo Madax kale oo ka socoata Wadamada dariska ah iyo Wadamada daneeya arimaha Soomaaliya.
Madaxweynayaasha la filayo in magaalada Muqdisho yimaadaan kana qeyb galaan Caleemo saarka Madaxweynaha Soomaaliya waxaa kamid ah Madaxweynaha dalka Jabuuti, Madaxweynaha dalka Kenya, Ra’isul Wasaaraha Itoobiya .
Sida aan Wararka ku heleyno Madaxweynaha dalka Sudan iyo Madax kale ayaa ka cudur daaratay in ay yimaadaan magaalada Muqdisho kana qeyb galaan Caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxa ayna balan qaadeen in Wsaiiro ay soo dirayaan.
Munaasabada ayaa sidoo kale la filayaa in ay kasoo qeyb galaan Wasiiro iyo masuliyiin kale oo kasocda Wadamo ay kamid yihiin Boqortooyada Sacuudiga, Turkiga, Burundi, Suudan,Kuwait iyo wadamo kale.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay , waxaana magaalada ka jira bandow saacado ah oo lagu soo rogay, waxaana wadooyinka la dhigay ciidamo badan oo amaanka sugaya.
Daawo Sawirada: Nin Brtish ah oo laga soo daayay Xabsiga Guwatanamo Bay oo Weerar Ismiidaamin ah geestay